Chinja maDVD ako ekare kana yako kuunganidza ku MP4 neWinX DVD Ripper (ine giveaway) | IPhone nhau
Chinja maDVD ako ekare kana yako kuunganidzira kune MP4 neWinX DVD Ripper (ine giveaway)
Nekuuya kwemafoni emafoni, kushandiswa kweese maviri emadhijitari achiri makamera uye vhidhiyo makamera yakaderedzwa zvakanyanya. Kugamuchirwa uku hakuna kungokanganisa vagadziri vakuru vemidziyo iyi, asi kwave nekurwadzisa zvakanyanya vagadziri veDVD, vagadziri vakakanganiswawo nemasevhisi ekuchengetedza gore.
Makore mashoma apfuura, chinhu chakanyanya kuzivikanwa kutora mafoto enzendo dzedu, pamwe nemavhidhiyo kuenda kuDVD, kuitira chengeta uye ugokwanisa kuigovana neshamwari uye nemhuri. Parizvino, nzira yakanyanya kushandiswa yekugovana mifananidzo kana mapikicha iri chinongedzo chebasa rekuchengetedza gore. Asi zvakadiniko nemaunganidzwa edu eDVD? Verenga chinyorwa uye isu tichakupa mhinduro; uyezve pakupera kwayo iwe uchave zvakare nemukana wekutora chikamu mune inonakidza dhiza.
Kana iwe uine makore mashoma, zvingangoita kuti iwo musoro wechinyorwa ichi wakubata iwe, nekuti pamwe haungangove unofarira chete kugona chinja maDVD ekare kuita manyorerwo edhijitari kuti une kumba kwemhuri vhidhiyo, asi zvakare, zvinokwanisika kuti pamusoro pemakore iwe wavaka yakazara yakazara maDVD.
Yekutepfenyura evhidhiyo masevhisi, sezvakaita zvitoro zvemadhijitari, zvinotibvumidza kuti tiwane nhamba hombe yezvikamu uye mafirimu, asi kana tikataura nezvemazita ane makore mashoma, chinhu ichi chakaomarara, sezvo zvisingaite kuti uzviwane zvakanyanya muNetflix, HBO, Amazon Prime Vhidhiyo kana kuburikidza neTunes Store, Play Mafirimu ...
Asi, kwete chete zvingave zvakaoma kuwana mafirimu ekare, asi zvakare, kana tikazvitenga, tichagara tichifunga kuti sezvo isiri muchimiro chemuviri, haisi yedu, asi isu takabhadhara mukana wekuti tizvione pese patinenge tichida, chimwe chinhu chiri chokwadi, asi pfungwa yevaridzi yevanhu inotamba kutamba matiri.
1 Ungashandura sei DVD kune MP4
2 Chii chatingaite neWinX DVD Ripper
2.1 DVD Backup
2.2 Chinja DVD kuita MP4, MOV, AVI, WMV, MPEG ...
2.3 Tamba maDVD ako pane chero chishandiso
2.4 Rongedza maDVD ako
3 Yakanakisa yeWinX DVD Ripper
3.1 Kopa pasina yemhando kurasikirwa
3.2 Deredza kukura kwemaDVD
3.3 Chinja DVD kuti ive yedhijitari fomati mumaminetsi
4 Maitiro ekuona yekare DVD pane iPhone
5 Edza WinX DVD Ripper uye utore chikamu muRaffle yeSynology NAS uye DVD showcases ...
5.1 WinX DVD Ripper Pro ine dhisikaundi ye56%
Ungashandura sei DVD kune MP4
Kana isu tiri kutsvaga application iyo inotibvumidza isu kushandura chero DVD kune dhijitari fomati, ingave iri MP4, MOV, AVI kana chero imwe fomati, isu tine nhamba hombe yezvikumbiro zviripo pa internet. Asi kana izvo zvatinoda zviri kumhanya, kuita kwakawanda uye kuenderana nenhamba huru yemafomati, chishandiso chakanakisa chiripo pamusika ndiWinX DVD Ripper.
WinX DVD Ripper, inowanikwa zvese zviri zviviri Windows PC kana Mac rakagadzirirwa vanhu avo havana kana hunyanzvi hwemakomputa kana izvo zvavanazvo hazvina hukama nemavhidhiyo mafomati. Kutenda kune yakangwara mushandisi interface, isu tinongofanirwa kuisa iyo DVD mukombuta yedu, sarudza chishandiso icho icho chinotambiswa pairi uye tinya RUN kutanga iyo shanduko.
Ndizvozvo, haufanire kusarudza macodec, maturu edhiyo, mafomati atisingazive kuti anorevei ... Zvakare, nekuda kwekumhanyisa Hardware, maitiro acho anokurumidza kwazvo uye zvinongotora maminetsi mashoma kushandura, semuenzaniso, DVD neawa nehafu.
Chii chatingaite neWinX DVD Ripper
WinX DVD Ripper haingotitenderi isu kushandura maDVD kuita digital fomati, asi zvakare inotibvumidza gadzira zvakafanana makopiKunyangwe kubva kumavhidhiyo ekare emhuri, kuburitswa kutsva pamusika, TV nhevedzano uye kunyange maDVD amira kushanda nemazvo mune edu akajairika kuverenga.
Chinja DVD kuita MP4, MOV, AVI, WMV, MPEG ...
Huwandu hwemafomati atinogona kushandura maDVD atinoda neWinX DVD Ripper inogumira kune izvo zviripo pamusika. Kana paine codec yatinogona kushandura DVD, chishandiso ichi chinovapa kwatiri.
Kushandura muunganidzwa wedu wekare wema DVD kuma fomati edhijitari anotibvumidza isu kutora mukana weiyo nzvimbo yekuunganidza kwedu kune zvimwe zvinangwa, pamusoro pekutitendera gara uine icho pedyo, kungave nekuichengeta pane yekunze hard drive, paNAS, mune yekuchengetedza gore sevhisi ... pamwe nekutibvumidza isu kuti tikurumidze kuigovana nependrive
Tamba maDVD ako pane chero chishandiso
Nekuda kweichi chishandiso, tinogona kubvarura maDVD edu kuti tikwanise zvibereke zvakare mumadhijitari fomati zvese pane yedu iPhone, iPad, Xbox, PlayStation, Android smartphone kana piritsi ... pasina kudiwa kweDVD kana Wi-Fi kubatana.
Rongedza maDVD ako
Imwe sarudzo yatinogona kuwana muWinX DVD Ripper inotibvumidza kugadzirisa akasiyana mavhidhiyo parameter kuitira kuti mhando yekutendeuka itipe mhedzisiro irinani pane yekutanga, mukana we wedzera zvinyorwa zvidiki, pamusoro pekucheka zvikamu zvevhidhiyo, kujoina zvidimbu zvakasiyana ...
Yakanakisa yeWinX DVD Ripper
Kopa pasina yemhando kurasikirwa
Kana isu tichida kugadzira kopi yevhidhiyo, hatidi kuti mhando irasike panguva yekuita. Mazhinji maapplication anoita kutsanya kutendeuka pasina kufunga kana mhando yeodhiyo kana vhidhiyo. WinX DVD Ripper inotibvumidza isu gadzira kopi yemaDVD edu kune MPEG2 faira, kusanganisira odhiyo muDolby AC3 / DTS 5.1 fomati, fomati yatinogona kubereka pasina matambudziko muVLC.
Asi kana izvo zvatinoda zviri chengetedza mufananidzo weIO weDVD, WinX DVD Ripper inotibvumidzawo kuti tiigadzire, mufananidzo unosanganisira zvese data uye chimiro chepakutanga chinowanikwa paDVD. Imwe sarudzo inowanikwa kuburikidza neichi chishandiso kushandura iyo vhidhiyo kuita MKV fomati, fomati isina yemhando kurasikirwa uye kwatinogona zvakare kusanganisira ese odhiyo nemavhidhiyo makwara eDVD.
Deredza kukura kwemaDVD
Kana isu tisingade yedu NAS, gore rekuchengetedza sevhisi kana yekunze hard drive zadza nekukurumidza uye mhando yevhidhiyo haina kukosha (nekuti tiri kuzozviburitsa pachiratidziri chidiki), neWinX DVD Ripper tinokwanisa kushandura zvese zviri zviviri ISO chiumbwa chatakambogadzira uye DVD (iyo saizi yepakati iri kutenderera 6- 8 GB) kune MP4 H.264 fomati inokonzeresa iyo faira ine saizi iri pakati pe700 ne1 GB pane yepakati mhando.
Chinja DVD kuti ive yedhijitari fomati mumaminetsi
Kana muunganidzwa wemaDVD atinawo wakanyanya kuwanda, zvingangoita kuti hatina kumbobvira takurudzira kuushandura kuita fomati yedhijitari nekuda kwenguva yakakwira inoda kutendeuka kwega kwega. Ndiko nekuti hauna kuyedza WinX DVD Ripper, chishandiso icho kuderedza maitiro eawa nehafu bhaisikopo kuita maminetsi mashanu anenge.
Izvi zvinogoneka nekuti iko kunyorera hakuite chete kushandisa komputa Hardware, asi zvakare, Iyo zvakare inovimba negirafu yechigadzirwa chedu. Nenzira iyi, timu yese inosvika pakushanda kuti ishandure fomati yatakasarudza panguva yakanakisa, izvo zvinotibvumidza kudzikisira maitiro
Maitiro ekuona yekare DVD pane iPhone
Izvi zvese zvakanyatsonaka, asi sekutaura kuri kuenda Semuenzaniso, bhatani. Nzira yakanakisa yekunzwisisa kuti yakapusa sei maitiro ekushandura DVD kune imwe fomati, tobva takuratidza maitiro acho chinja DVD kuita fomati yatinogona kutamba pane iPhone kana iPad.
Kana tangoisa DVD mumidziyo yedu, tora paDisk kuitira kuti iyo application iite otomatiki zvese zvirimo.
Tevere, hwindo rinoratidzwa pamwe nemhando dzakasiyana kwatinogona kushandura zvirimo. Sezvatiri isu iri iPhone, isu tinofanirwa kusarudza Apple Chishandiso> iPhone Vhidhiyo.
Pakupedzisira, tinofanira sarudza iPhone modhi kwatichaenda kuburitsa zvirimo uye pakupedzisira tinya paRUN kutanga maitiro.
Edza WinX DVD Ripper uye utore chikamu muRaffle yeSynology NAS uye DVD showcases ...
WinX inowanikwa yeWindows uye yeMac. Vakomana vanobva kuWinX DVD Ripper vanotikoka kuti titange raffle matinogona kuhwina NAS kubva kuSynology, uko kwatichakwanisa kuchengeta mafaera ese atinoshandura kubva kuDVD redu rekuunganidzwa, matanhatu anoratidza kwatinogona kusevha kwedu muhuviri fomati mukuwedzera kune zvimwe zvipo.
Kuti tiite izvi, isu tinongofanira shandisa iyi webhusaiti uye tumira foto nayo zvatiri kuronga kuita neyedu DVD muunganidzwa. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, vanotibvumidzawo kurodha kopi inoshanda yeWinX DVD Ripper. Izvo chete asi ndezvekuti iyi kopi haigamuchire zvigadziriso mune ramangwana.
WinX DVD Ripper Pro ine dhisikaundi ye56%
Kana tichida kugamuchira zvitsva, tinofanirwa tenga rezinesi rakazara, rezinesi rine mutengo uri 29,95 euros, inova iyo 56% dhisikaundi pamutengo wayo wenguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » Chinja maDVD ako ekare kana yako kuunganidzira kune MP4 neWinX DVD Ripper (ine giveaway)
Apple ichatanga kugadzirwa kweiyo iPhone 5G mwedzi unouya
Iyo yekutanga beta yeiyo iOS 13.5.5 ichiri kutsigira iyo jailbreak ye unc0ver